Xidigii Hore Ee Arsenal, Coquelin Oo Ambalaas Looga Saaray Xarunta Tababarka Ee Valencia + Sababta %
Maanta oo Jimco ah, xarunta tababarka ee kooxda kubada cagta Valencia, oo lagu magacaabo Desgracia ayaa ciyaaryahanka Francis Coquelin, waxaa looga qaaday baabuurta gurmadka deg deg ah ee Ambalaasta, kadib markii uu dhaawac culus uu soo gaaray.
Laacibkaan reer Faransa ayaa waxaa dhaawac uu kasoo gaaray Kubka lugta midig, iyadoona taasi ay keentay in loola caro qolka qaliinka, halkaasoo qaliin uu ku mari doono sida uu xaqiijiyay maamulaha naadiga Valencia, ninka lagu magacaabo Marcelino.
“Isagoo jooga tababarka ayaa waxaa ka jabay Kubka lugta midig, waxaana naga dhaawacmay ciyaaryahan muhiim ah, kaasoo si fiican noola qabasaday, islamarkaana tayadiisa noo muujiyay, aad ayaana uga muragooneynaa,” ayuu yiri Marcelino.
“Waxaan rajeyneynaa inuu si deg deg ah noogu soo laabto, marnaba kuma aysan dhicin tan oo kale mana garan karno waxa sababay, laakiin wuxuu geli doonaa xaalad soo gabasho wanaag ayaana u rajeyneynaa” ayuu Marcelino ku daray hadalkiisa.
“Qof walba oo halkaan jooga wuxuu isaga urajeynayaa inuu si dhaqsi ah noogu soo noqdo, waxaana uu ahaa mid kooxda isla-jaanqaadkeeda si fiican ufahmay,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, hogaamiyaha naadiga Valencia.
Francis Coquelin, ayaa wuxuu Valencia uu uga soo biiray bishii Janaayo ee sanadkaan 2018 dhigeeda kooxda reer England ee Arsenal, waxayna ku heshay beeca xurta, isagoona tan iyo markii uu kusoo biiray udheelay kulamo badan.